Media Kurakani – Media Kurakani
October 10th, 2020 Media Kurakani News Update No Comments
तपाईँसँग ऐतिहासिक महत्त्वका पुराना रेडियो सेट, टेलिभिजन सेट वा टेलिफोन सेट छन् ? सञ्चारको विकासक्रम दर्शाउने पत्रपत्रिका वा सञ्चारसामग्री छन् ? टाइपराइटर वा तस्बिर छन् ? छन् भने ती प्रेस सङ्ग्रहालयका लागि उपयुक्त हुन सक्छन् । तपाईँ त्यस्ता ऐतिहासिक महत्त्वका सञ्चार सामग्री निःशुल्क वा रकम लिएर प्रेस सङ्ग्रहालयलाई दिन सक्नुहुन्छ…
September 23rd, 2020 Media Kurakani Media News No Comments
मिडिया सञ्चालकहरूले नयाँ संस्था गठन गरेका छन् । नयाँ संस्था ‘मिडिया एलाइन्स नेपाल’ गठनसँगै मिडिया सञ्चालकहरूको छाता संस्था भनिने नेपाल मिडिया सोसाइटी विभाजित भएको छ । यसअघि सोसाइटीमा रहेकासहित अन्य मिडिया सञ्चालकहरूले असोज ७ गते नयाँ संस्था गठन गरेका हुन् । एभिन्युज टेलिभिजनका अध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकार नवगठित संस्थाको अध्यक्ष चुनिएका…